I-Villa Sunset | Amagumbi okulala ayi-5 | Imoto Ayifuneki - I-Airbnb
I-Villa Sunset | Amagumbi okulala ayi-5 | Imoto Ayifuneki
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguNick
IVilla Sunset yindlu enkulu yangoku esekwe entliziyweni yeSan Antonio Bay. Indlu ibekwe ngaphezulu kwamanqanaba amabini enamagumbi amabini azimeleyo azimeleyo kumgangatho ophantsi. IVilla Sunset inephuli enkulu yabucala kunye nendawo eninzi yokutshisa ilanga, i-bbq kwaye uphumle nabahlobo bakho. Bathetha yonke into malunga ngendawo ekumnyango wakho wezinto ezininzi
I-Villa Sunset lelona khaya lifanelekileyo leholide kwiintsapho kunye namaqela ngokufanayo akhangela i-villa enkulu esemgangathweni enezixhobo ezikufutshane.
I-Villa Sunset yenzelwe amanqanaba amabini anamagumbi amabini azimeleyo kwinqanaba le-pool kunye namagumbi okulala amathathu kwinqanaba lokuqala. Le ndlu ilungele amaqela amakhulu / iintsapho ezijonge ubumfihlo kodwa ziholide kunye.
Ungena kwi-villa kwipaseji ebanzi ekhokelela kwigumbi lokuphumla elikhulu elivulekileyo (elinesofa ezitofotofo kunye neTV ebanzi) kunye nendawo yokutyela yangaphakathi. Ukusuka kwigumbi lokuphumla unebalcony emile "L" enefenitshala yangaphandle ejonge echibini. Eyokuqala kumagumbi amathathu ekhitshi axhotyiswe kakuhle abekwe kweli nqanaba anazo zonke izixhobo onokuthi ulindele ukuzifumana kubandakanya idishwasher, umatshini wekofu kunye nefriji enkulu / ifriji. Ikhitshi nayo inebar yesidlo sakusasa kunye nenye ibalcony eyahlukileyo - umbono wesidlo sakusasa elangeni.
Igumbi leMaster libonelela ngebhedi enkulu ephindwe kabini, indawo eyaneleyo yokugcina, iTV kunye nebalcony yabucala eneembono zamachibi.
Igumbi lesibini lineebhedi ezimbini ezingatshatanga (ezinokuguqulwa zibe kabini) kunye nokugcinwa okwaneleyo.
Igumbi lokulala lesithathu lineebhedi ezimbini ezingatshatanga (ezinokuthi ziguqulwe zibe kabini) kunye nendawo enkulu yokugcina.
Igumbi lokuhlambela eliphambili linebhafu enkulu yekona, ishawa, yangasese, ibhidet kunye neesinki ezimbini. Kukho nendlu yangasese eyahlukileyo kwinqanaba lokuqala.
Igumbi lokuqala libonelela ngegumbi lokuphumla elivulekileyo (isofa / iTV) / indawo yekhitshi (iHob, ioveni, umatshini wokuvasa) okhokelela kwigumbi elibanzi elinesibini kunye nelinye igumbi lokuhlambela (Ishawa/yangasese)
Igumbi lesibini libonelela ngegumbi lokuphumla elivulekileyo (isofa / iTV) / indawo yokulala emibini ekhokelela kwelinye ikhitshi elinomnyango owahlukileyo. Nali negumbi lokuhlambela elahlukileyo (Ishawa/yangasese)
Kukho indawo eluncedo ekungeneni kwendlu yesibini apho uya kufumana omnye umatshini wokuhlamba / isomisi.
IVilla Sunset ikwindawo ephambili eSan Antonio Bay. Ifihlwe kwindawo yayo yabucala kodwa kwimizuzu emihlanu yokuhamba ukusuka endlwini ungafumana uluhlu olubanzi lwezinto eziluncedo. Ivenkile enkulu, iindawo zokutyela ezininzi ezibonelela ngazo zonke izinto zokutya, iikhefi, iibhari kunye necafe enkulu yasekhaya ejongene nayo-ilungele ikofu eyomeleleyo yaseSpain.
Ezinye iimbalasane, kumgama omfutshane kakhulu wokuhamba ziquka: -
I-Kumharas - indawo ebekwe ngasemva yokutshona kwelanga kunye ne-hippy vibe. Ukubonelela ngokutya kwesitayile saseThai, iivenkile zentengiso yangokuhlwa kunye nomculo ophilayo.
Can Pujol - ityotyombe lentlanzi elilula kodwa elimnandi, elaziwa njengelinye lawona abalaseleyo e-Ibiza.
IPort des torrent kukuhamba ngemizuzu eyi-10 kwaye apha unokufumana ulwandle oluhle kakhulu kunye nepaki yamanzi ephakathi-ilungile ukuba unabantwana.
Imoto ayifunwa kule villa. Kukho rhoqo iibhasi kunye neenkonzo zeeteksi zamanzi ecaleni kwebhayi ukuya eSan Antonio. Kwabo bathanda ukuhambahamba eSan Antonio bay luhambo olumnandi kakhulu olunomtsalane ngakumbi oko kukuthi igalufa encinci, iipaki zolonwabo zosapho, iikhefi, iibhari, iindawo zokutyela kunye neelwandle ezisecaleni kwendlela.
Umphathi wethu we-villa uya kuba ekho ukuze ancede kakhulu okanye kancinci njengoko ufuna
Inombolo yomthetho: ETV-2121-E
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sant Antoni de Portmany